ကူကီးလူမျိုးတို့၏ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် တော်လှန်ရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ကူကီးလူမျိုးတို့၏ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် တော်လှန်ရေး
ကူကီးလူမြိုးတို့၏ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် တော်လှန်ရေး (အင်္ဂလိပ်-ကူကီးစစ်ပွဲ ၁၉၁၇-၁၉၁၉) Anglo-Kuki War (or) The Kuki Rising (1917-19)
ကူကီးလူမျိုးတို့သည် ရှေးပဝေသဏီကပင် ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေဒေသတွင် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှန်း ဖြင့် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် လွတ်လပ်အေးချမ်းစွာ ရပ်တည်နေထိုင်လာခဲ့ကြသော လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ကူကီးလူမျိုးတို့သည် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့် တရားစီရင်ထုံးများကိုလည်း သီးခြားပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီး လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်ရေး စသည်တို့ တွင် မည်သည့်လူမျိုးခြားကိုမျှ အားကိုးမှီခိုခြင်းမရှိဘဲ သမိုင်းစဉ်တလျှောက်လုံး လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည် လာခဲ့ကြသည်။
ကူကီးလူမျိုးတို့ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် ပိုင်ဆိုင်နေထိုင်လာခဲ့ကြသော နယ်မြေများမှာ အရှေ့ဘက်တွင် အ ထက်ချင်းတွင်းမြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းတလျှောက်၊ ကလေးကဘော်ဒေသမှ ဆွန်ပရာဗွမ်ဒေသအထိ နှင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ထန်ကိုင်ဒေသတို့ ပါဝင်သည်။ အနောက်ဘက်တွင် မဏိပူရပြည်နယ်ရှိ တောင်တန်း ဒေသများ၊ နာဂပြည်နယ်ရှိ Ahthibung, Kanjang ဒေသများ၊ အာသံပြည်နယ်ရှိ Karbi-Anglong ဒေသ တို့ ပါဝင်ပြီး စတုရန်းမိုင်ပေါင်း (၆,၀၀၀)ကျော် ကျယ်ပြန့်သည်။ ကူကီးလူမျိုးတို့သည် မိမိတို့၏ ဘိုးဘွား ပိုင်နယ်မြေများအတွင်း သက်ဆိုင်ရာမျိုးနွယ်စု (Haosa) ဟွောင်ဆာ အကြီးအကဲတို့၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျခြင်းမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်လာခဲ့ကြသည် မှာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှု မခံရမီ အချိန်ထိပင်ဖြစ်သည်။
ကူကီးလူမျိုးတို့သည် မိမိတို့၏ ဘိုးဘွားပိုင်နယ်မြေများကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ရန်ပြုလာသော နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကျူးကျော်မှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြရာ ပထမကမာ္ဘစစ်အတွင်း ဖြစ် ပွားခဲ့သော Anglo-Kuki War (အင်္ဂလိပ်-ကူကီးစစ်ပွဲ ၁၉၁၇-၁၉) မှာ အကြီးကျယ်အပြင်းထန်ဆုံးသော စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း Anglo-Kuki War (အင်္ဂလိပ်-ကူကီးစစ်ပွဲ ၁၉၁၇-၁၉) သည် အာရှတစ်ခွင်၌ ဗြိ တိသျှနယ်ချဲ့တို့၏ ကျူးကျော်မှုများကို ခုခံတော်လှန်ခဲ့ကြသည့် အကြီးကျယ်ဆုံးနှင့် အပြင်းထန်ဆုံးသော သမိုင်းဝင်စစ်ပွဲကြီးများအနက် တခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နယ်စားပယ်စားများဖြစ်ကြသော ကူကီးအကြီးအကဲ (Haosa)ဟွောင်ဆာ များသည် ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့၏ ကျူးကျော်မှု အပေါ်တွင် ခုခံတိုက်ခိုက်သင့် မတိုက်ခိုက်သင့် ဆုံးဖြတ်ရန် တမျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြု သည့် အစည်းအဝေးများကို ဒေသအတွင်းရှိ Chahsat, Longjaနှင့် Jampi တို့တွင် သုံးကြိမ်တိုင်အောင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ယင်းအစည်းအဝေးပွဲများမှ (Haosa) ဟွောင်ဆာ အကြီးအကဲတို့၏ ဆုံးဖြတ် ချက်များအရ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကျူးကျော်စစ်ကို အမိမြေမှ စစ်ကြောင်း (၄) ကြောင်းဖြန့်ကျက်ကာ ခု ခံတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ထိုသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့၏ ကျူးကျော်စစ်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန်အ တွက် ကူကီးရိုးရာထုံးစံနှင့်အညီ ဝါအကြီးဆုံးဖြစ်သူ Aisan ဟွောင်ဆာအကြီးအကဲ Pu.Chengjapao -Innpipa (King of Kuki) မှ ၁၉၁၇၊ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့၌ ဒေသအတွင်းရှိ ကူကီးအကြီးအကဲအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ကာ နွားနောက်တစ်ကောင်ကို သတ်ပြီး ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုသည့် အခမ်းအနားတရပ်ကို ဦးစီး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ကူကီးလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာအစဉ်အလာနှင့် အညီ Seilmei-Tan, Sajam-Lhah တို့ကို ပြုလုပ်ပြီး နွားနောက်၏ အသည်းနှလုံးတို့ကို ရိုးရာခေါင်ရည် နှင့်အတူ စားသောက်ပြီး ဝါအကြီးဆုံးပုဂိ္ဂုလ်မှ ဝါအငယ်ဆုံးအထိ သစ္စာဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်း ကို Hansa-NehaKihaah-Sielဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲတွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တော်လှန် နိုင်ရန်အတွက် (၁)။ စစ်ပွဲတွင် ကူကီးပြည်သူလူထု တရပ်လုံးပါဝင် တိုက်ပွဲဝင်ရန်။ (၂)။ စစ်ပွဲတွင် မပါဝင်သူများ၊ ရန်သူနှင့် အပေးအယူပြုလုပ်သူများ၊ ရန်သူကို ကူညီအားပေးသည့် သစ္စာ ဖောက်များအား ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု မှန်သမျှကို သိမ်းယူခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ရပ်ရွာများကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြရန် သစ္စာဆိုခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ သစ္စာဆိုကြပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ရိုးရာအစဉ်အလာနှင့်အညီ ကူကီးတမျိုးသားလုံးကို တပ်လှန့် သည့် အနေဖြင့် ရွှေလံဘိုငရုတ်သီးနှင့် မီးစိုက်ထားသောထင်းချောင်းအား နှီးဖြင့်တွဲချည်ထားသည့် အ မှတ်အသား Thingkho le Melchapom Tawl ကို ကူကီးနယ်မြေဒေသ အားလုံးတွင်ရောက်ရှိနိုင်ရန် လက်ဆင့်ကမ်းစနစ်ဖြင့် တရွာမှ တရွာသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကျူးကျော်စစ်ကို ခုခံတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရန် ၁။ Jampi (Haosa)ဟွောင်ဆာ Pu.Tintong နှင့် Thenjang (Haosa)ဟွောင်ဆာ Pu.Enjakhup ကွပ်ကဲ သော Jampi Area စစ်ကြောင်း (အနောက်ဘက် စစ်ကြောင်း)၊
၂။ Henglep (Haosa)ဟွောင်ဆာ Pu.Pakang နှင့် Loikhai (Haosa)ဟွောင်ဆာ Pu.Semchung ကွပ် ကဲသော Henglep-Loikhai Area စစ်ကြောင်း (တောင်ဘက် စစ်ကြောင်း)၊
၃။ Longja (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu.Ngulbul ၊ Lonpi (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu.Ngulkhup နှင့် Goboh (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu.Letthang ကွပ်ကဲသော Lonpi-Lonja Area စစ်ကြောင်း (အရှေ့တောင်ဘက် စစ်ကြောင်း)၊
၄။ Aisan (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu.Chengjapao (King of Kuki) နှင့် Chahsat (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu.Lhunkhomang ကွပ်ကဲသော Aisan-Chahsat Area စစ်ကြောင်း (အရှေ့ဘက် စစ်ကြောင်း) ဟူ၍ စစ်ကြောင်း (၄) ကြောင်းဖြန့်ကျက်ကာ ခုခံတိုက်ခိုက်ကြသည်။
ထိုစဉ်က ကူကီးလူမျိုးများ အသုံးပြုခဲ့ကြသော လက်နက်များတွင် ဓားလှံ၊ လေးမြား၊ တူမီးသေနတ်၊ သား ရေဖြင့်ပြုလုပ်သည့် Pumpiဟုခေါ်သော သားရေအမြောက်၊ ရန်သူများအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေစေ နိုင်သော ကျောက်တုံးကြီးများကို ထောင်ခြောက်ဆင်ထားသည့် ကျောက်မောင်းအပါအဝင် အခြားသော လက်နက်မျိုးစုံတို့ကိုလည်း တီထွင်အသုံးပြု ခဲ့ကြသည်။
ကူကီးလူမျိုးများ စစ်ရေးပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Lt.Colonel H.W.G.Cole, Political Agentသည် Shillongအခြေစိုက် Assam Sorkar, Special Officer, B.C.Allen ထံတွင် စာအမှတ် D.O.No.5c ဖြင့် အစီရင်ခံစာပေးပို့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း Major. L.T Walker, Captain. Montibiar နှင့် Lieutenant. Neadhem တို့သည် Kohima အခြေစိုက် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်၍ Jampi Area စစ်ကြောင်း (အ နောက်ဘက် စစ်ကြောင်း) ကို၎င်း၊ Captain. Goodal, Captain. Fox နှင့် Lieutenant. Carter တို့သည် Imphal အခြေစိုက် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်၍ Henglep-Loikhai Area စစ်ကြောင်း (တောင်ဘက် စစ်ကြောင်း)ကို၎င်း၊ Captain. Cooile, Captain. Coote, Captain. Montefierနှင့် Lieutenant. Askurit တို့သည် Burma အခြေစိုက် အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်၍ Lonpi-Lonja Area စစ်ကြောင်း (အရှေ့ တောင်ဘက် စစ်ကြောင်း)ကို၎င်း၊ Captain.Parryle, CaptainLt.Patrick နှင့် Lieutenant. Molesworth တို့သည် Imphal အခြေစိုက် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်၍ Aisan-Chahsat Area စစ်ကြောင်း (အရှေ့ ဘက် စစ်ကြောင်း) ကို၎င်း အသီးသီးဝင်ရောက်၍ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
J.C.Higgins, Officiating Political Agent ၏ ဦးဆောင်မှု ဖြင့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်၏ Assam Rifles တပ်များသည် ၁၉၁၇၊ ဧပြီလတွင် ကူကီးနယ်မြေကို ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ခဲ့ကြရာ Lonpi (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu. Ngulkhup ဦးဆောင်သော ကူကီးစစ်သည်များနှင့် Chahpi ချောင်းအနီးခံတပ်တွင် အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်၏ တပ်များအရေးနိမ့် ကာ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြသည်။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရဘက်မှ Political Agentသည် စစ်သည်အင် အားထပ်မံဖြည့်စွက်ကာ Capt.Coote  ကွပ်ကဲသော 4th, Assam Rifle တပ်ဖြင့် Lonpi (Haosa)ဟွောင် ဆာ အုပ်ချုပ်သော Lonpiကို ၁၉၁၇၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရာ နယ်ချဲ့တော် လှန်ရေးမှာ ပို၍အရှိန်အဟုန်ပြင်ထန်လာခဲ့သည်။
Henglep-Loikhai Area စစ်ကြောင်းသည် ၁၉၁၇၊ ဒီဇင်္ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Manipur State Forest ကို တန်းပြန်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၁၈ ဇန်နဝါရီလလယ်တွင် အထက်ချင်းတွင်း ကူကီးနယ်မြေ ဖြစ်သော Somratractသို့ ထွက်ခွာလာသည့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အရာရှိ Mr.Parkerနှင့် အဖွဲ့ကို Dansagu အနီးတွင် ကူကီးစစ်သည်များမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကူကီးလူမျိုးများသည် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ များကို မိမိတို့နယ်မြေအသီးသီးတွင် ဟန်ချက်ညီညီ တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၁၈၊ ဖေဖဝါရီလလယ်တွင်လည်း Longja (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu.Ngulbul နှင့် ကူကီးစစ်သည်များ အခိုင်အမာတပ်စွဲသော Longja-Kulpiခံတပ်ကို Captain Montefier ကွပ်ကဲသော နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တပ် များမှ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော်လည်း အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာခဲ့ကြသည်။
နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့သည် Longja (Haosa)ဟွောင်ဆာ Pu.Ngulbul အား ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ သစ္စာခံ ကမ်ဟောင် တိုက်သူကြီး၏ အကူအညီဖြင့် Pu.Ngulbul ၏ သမီးဖြစ်သူကို ဖမ်းဆီးပြီး တောထဲတွင် ရက်စက်စွာ ညှင်းဆဲကာ ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ သမီး၏ အဖြစ်ဆိုးကြောင့် သမီး ဖြစ်သူကို ကယ်ဆယ်ရန် Longja-Kulpi ခံတပ်မှ ထွက်လာခဲ့သော Longja အကြီးအကဲမှာ ရန်သူအင်္ဂ လိပ်တပ်၏ ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက် ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ပေါင်တွင်ကျည်သင့်ခဲ့သည်။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့သည် ဒဏ်ရာရပြီး ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသော Longja အကြီးအကဲကို အရှင်လတ်လပ် ခေါင်းဖြတ်ခဲ့ကြသည့်အပြင် Longja အကြီးအကဲ၏ ခေါင်းကို သမီးဖြစ်သူအား ပုလိုင်းဖြင့်သယ်စေပြီး ကူကီးရွာတိုင်းသို့ တရွာဝင် တ ရွာထွက်ကာ ပြသစေခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် Longja အကြီးအကဲ၏ သမီးအပြင် ဖခင်နှင့် အခြားသားသမီး များကိုလည်း ရက်စက်စွာညှင်းဆဲကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ သစ္စာခံ ချင်း တိုက်သူကြီးအား Longja အကြီးအကဲ၏ ဦးခေါင်းဖြင့် အောင်ပွဲခံစေသည့်အပြင် အလောင်းကိုလည်း အ စိတ်စိတ် အမွှာမွှာလှီးဖြတ်ကာ Kamhau ရွာတိုင်းတွင် အိမ်ခြေအလိုက် ဝေငှခြင်းဖြင့် အောင်ပွဲခံစေခဲ့သည်။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့သည် ကူကီးပြည်သူများထံ ၎င်းတို့အား ဆက်လက်တော်လှန်ပါကLongja အကြီးအ ကဲနှင့် မိသားစုကဲ့သို့ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ပစ်မည်ဟု ကူကီးလူမျိုးများ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစေရန် လူမ ဆန်သော အဆိုပါ လုပ်ရပ်များဖြင့် အဆုံစွန် ရက်စက်ခဲ့ကြသည်။
Chahsat (Haosa) ဟွောင်ဆာ Pu.Lhunkhomang (Pache)နှင့် ကူကီးစစ်သည်များ အခိုင်အမာတပ်စွဲ နေသော Kamjong-Kulpiခံတပ်ကို J.C.Higgins,ICS,PoliticalAgent ဦးဆောင်၍ Captain Lt.Parryနှင့် Captain Lt.Patrick ကွပ်ကဲသော နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်များမှ ၁၉၁၈ နှစ်ဦးပိုင်း၌ အပြင်းအထန်ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ဘက်မှ Lt.Molesworth အပါအဝင် စစ်သည်အမြောက်အများ ကျဆုံးပြီး အရေးနိမ့်ကာ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြသည်။
ဤသို့ဖြင့် ကူကီးလူမျိုးများနှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်များသည် မထင်မှတ်ဘဲ အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာခဲ့ကြသည်။ စစ်ပွဲ၏ အစပိုင်းတွင် ကူကီးလူမျိုးဘက်မှ အသာစီးရပြီး ကျူး ကျော်စစ်ကို ခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့် အနေအထားတွင်ပင် ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှာ ကူကီးလူမျိုးများ စည်းလုံးညီညွတ်ချိန်နှင့် အင်အားတောင့်တင်းချိန်ဖြစ်သောကြောင့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကျူးကျော်စစ် ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ရဲဝ့ံစွာတော်လှန်ခ့ဲကြခြင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်-ကူကီးစစ်ပွဲအရှိန်မှာ ပိုမိုပြင်ထန်လာခဲ့ရာ ၁၉၁၈၊ ဇွန်လတွင် Civil administration နှင့် Assam Chief Commissioner to DIG....Assam Rifles တို့သည် Simla မြို့ရှိ Army Head-quarters, Commander-In-Chief, India Army ထံသို့သွားရောက်ကာ စစ်ကူတောင်ခံခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လည်း ၁၉၁၈၊ နိုဝင်္ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့သည် ဒုတိယအကြိမ် ကူကီးဘိုးဘွားပိုင်မြေ ကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန် ၎င်းတို့လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီစစ်တပ်များဖြစ်ကြသော Burma Military Police (၃၂၀၀) နှင့် Assam Rifle (၂၆၀၀) တို့ကို ဖြည့်စွက်ကာ စစ်သည်တော် စုစုပေါင်း (၇၆၅၀) နှင့် စစ်အရာရှိ (၂၀၈) တို့အား ကူလီ (၈၃၀၀) ကျော်တို့နှင့်အတူ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံ ထိုးစစ် ဆင်စေခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ကျူးကျော်စစ်ကို ဗြိတိသျှ စစ်ဗိုလ်ချုပ် Lieutenant General Sir. Henry D.U.Keary, K.C.B, K.C.I.E, D.S.O, I.A, General Officer Commanding, Burma Division မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။၎င်း၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်Brigarial Macquidအား စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ပြီး Imphal မှ ၎င်း၊ Lieutenant Colonel J.L.W.Firench-Mullen, C.I.E., I.A အား အထက်ချင်းတွင်းဒေသတွင် ၎င်း အခြေပြုစေကာ စနစ်တကျ ထိုးစစ်ဆင်စေခဲ့သည်။ ထိုမျှသာမကဘဲ ဤဒုတိယအကြိမ် ကျူးကျော် စစ်တွင်လည်း ၎င်းတို့၏ လက်အောက်ခံလူမျိုးများကို ထပ်မံစည်းရုံးပြီး နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကူကီးလူမျိုးများကို အစွမ်းကုန်ချေမှုန်းခဲ့ကြသည်။
အင်္ဂလိပ်-ကူကီးစစ်ပွဲတွင် ကူကီးစစ်သည်များသည် အင်အားကြီးမားလှသော အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့စစ်တပ်ကို ပြောက်ကျားစစ်ဗျူဟာဖြင့် ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော်လည်း နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့သည် မြေလှန်စစ်ဆင်ရေး ဖြင့် ရက်စက်မှုပေါင်းစုံကို အသုံးပြုကာ အစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကျွန်အဖြစ် ဘဝအရှုံးမခံလိုသော ကူကီးစစ်သည်များသည် မိမိတို့၏ အသက်ကို စွန့်လွှတ်ကြသူများပီပီ ကျဆုံးသူများလေလေ ထိုသွေးကြွေးအတွက် ပေးဆပ်မည့်သူ များပြားလေလေဖြစ်ကာ တစ်ဗိုလ်ကျ တစ် ဗိုလ်တက်စနစ်ဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက်လက်၍ တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့စစ်တပ်သည် ကူကီးလူမျိုးများ၏ လယ်ယာကောက်ပဲသီးနှံများကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း၊ အိမ်မွေးတိရိစာ္ဆန်ဟူသမျှကို ပစ်ခတ်သတ်ဖျက်ခြင်း၊ အိမ်ယာနှင့် စပါးကျီဟူသမျှကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း၊ အရပ်ဘက်ပြည်သူများ၏ စားနှပ်ရိက္ခာ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုများကို ပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်း၊ မြို့ရွာများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း၊ စစ်ပွဲနှင့်မသက်ဆိုင်သော အရပ်ဘက်ပြည်သူများနှင့် သက်ကြီးရွယ် အို ကလေးသူငယ်များပါ မချန်ဘဲ ကျားမ-မရွေး ညှာတာမှုကင်းမဲ့စွာဖြင့် တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်းစေဘဲ ကမ်းကုန်အောင် ရက်စက်ခြင်း၊ ကူကီးစစ်သည်များ၏ သားသမီးများနှင့် မိဘများကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်း ဆီးခြင်း၊ သတ်ဖျက်ခြင်း အစရှိသော ညှာတာမှုကင်းမဲ့ပြီး ရက်စက်ယုတ်မာသည့် စစ်ဆင်ရေးနည်းမျိုးစုံကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကူကီးလူမျိုးတို့၏_နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်_တော်လှန်ရေး&oldid=477765" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၄:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။